Yini ongayibona edolobheni laseFrance iColmar | Izindaba Zokuhamba
IColmar idolobha elihle lokho kukhipha intelezi kuzo zonke izinhlangothi ezine. Itholakala esifundeni i-Alsace eFrance, eduze nomngcele neJalimane, yingakho izindlu eziningi zisikhumbuza isitayela saseBavaria. Kwakungumuzi wasebukhosini wamahhala obukhona bawo sebukhulunywa ngekhulu lesi-XNUMX. Namuhla kuyindawo yezivakashi ngenxa yokuthi lilondolozwe kahle kanjani idolobha lakhona elidala.
En IColmar kuningi ongakubona yize kungelona idolobha elikhulu. Leli dolobha linezindlu ezigcinwe kahle nedolobha elidala okufanele libonwe, ikakhulukazi ngoKhisimusi, lapho yonke into igcwele imihlobiso. Kepha iColmar ingaphezu kwalokhu, ngakho-ke sizothola wonke amakhona ayo.
1 I-La Petite Venise
2 URue des Marchands
3 Indawo ka-l'Ancienne Douane
4 ISonto LaseCollegiant laseSan Martín
5 Umnyuziyamu we-Unterlinden
6 IPfister House
7 IMaison des Tetes
8 ISonto LaseDominican
9 Izimakethe zikaKhisimusi
I-La Petite Venise
Uma uya eRue de la Poissonnerie, lapho ungabona khona izindlu ezijwayelekile ezimibalabala ezinamapulangwe eceleni komsele bese ulandela lo mgwaqo, uzofika kulokho okwaziwa ngokuthi yiPetite Venise. ILittle Venice iyindawo ebukekayo yezinganekwane, ecishe ifane nengxenye yonke endala yeColmar. Kusuka ebhulohweni iRue de Turenne imibono emihle iyathathwa ukuthatha izithombe zamaphupho zale ndawo yomsele.
URue des Marchands
Lo mgwaqo obaluleke kakhulu futhi ophakathi nendawo edolobheni laseColmar, ngakho-ke kungenye yezivakashi zawo ezibalulekile, ikakhulukazi uma sikhuluma ngesikhathi sikaKhisimusi. Ine izindlu zendabuko zesitayela se-Alsatian njengeCasa Pfister noma i-Weinhof House. Ngesikhathi sikaKhisimusi lo mgwaqo ugcwala amalambu kuma-facade kanye nomhlobiso onganaki muntu. Ukuphela konyaka kusengumgwaqo omuhle ongadlula kuwo uvakashele izitolo zawo ezincane.
Indawo ka-l'Ancienne Douane
Eduze neRue des Marchands yilesi sikwele esikhulu, esingesinye sezindawo ezibaluleke kakhulu eColmar. Ungabona i- Isakhiwo saseKoïfhus, amasiko amadala lapho imikhiqizo eyayithunyelwa ngaphandle kwakudingeka idlule. Kuwo kunesithombe sika-Auguste Bartholdi.
ISonto LaseCollegiant laseSan Martín
Leli bandla elihlangene liyi etholakala enkabeni ye-Place de la Cathedrale. Isonto ekuqaleni lakhiwa ngekhulu le-XNUMX ngesitayela sase-Romanesque, yize liphinde lavuselelwa futhi ngesitayela se-Gothic, okuyikhona esikubonayo namuhla. Ine-façade lapho umbhoshongo ophakeme ugqame khona. Ngaphakathi ungabona amafasitela anengilazi anamabala, amasonto asemaceleni kanye nohlaka.
Lesi sigcinamagugu si etholakala endaweni eyiyindela yangaphambilini. Ngaphakathi emnyuziyamu singabona ukuvuselelwa kwangenkathi ephakathi noma kokuqala kusetshenziswa abaculi bendawo noma abaseduze. Iphinde ivelele i-Isenheim Altarpiece futhi inezigaba eziningana zokuvakashela ezifana nemivubukulo, ukubaza noma ingilazi enamabala.
Lona indlu yokuqala futhi enhle yekhulu le-XNUMX Ingesinye sezakhiwo zesitayela se-Renaissance esihle futhi esigcinwe kahle eColmar. Itholakala kunombolo 11 eRue des Marchands eyaziwayo. Ngaphandle ungabona imipheme yalo yasendulo yamapulangwe nemidwebo yezithombe yangemuva yenkolo. Eduze kwale ndlu sithola nesinye sezakhiwo ezindala kakhulu kuleli dolobha, unombolo 14, okwakuyindlu yokugcina okwakungokwamanazaretha esigodlo sase-Unterlinden.
IMaison des Tetes
Eduzane neNdawo ye-Unterlinden kungenye ye- izakhiwo ezibaluleke kakhulu kuyo yonke iColmar. Lesi sakhiwo se-Renaissance sihlehlela emuva ngekhulu le-19 futhi sise-XNUMX Rue de Tetes. Uma ungahlali ehhotela lakhe, indlu, esivele iyiSikhumbuzo Somlando saseFrance, ingabonakala kuphela ngaphandle, yize ukuvakasha kukufanele ukuthi kungokwasekuqaleni kangakanani. Ku-façade yayo singabona ubuso obungaphezu kwekhulu, yingakho igama elithi Casa de las Cabezas. Engxenyeni yayo engenhla ungabona isibalo sokubambisana.
Lona Isonto lesitayela samaGothic lisePlaza de los Dominicos. Inesitayela esihle futhi iphinde yakhiwa phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Kufanele ukuvakashelwa ukubabaza amafasitela amahle anengilazi kusukela ngekhulu le-XNUMX, uqweqwe lwe-Virgin of the Roses kanye nekhwaya yesitayela se-baroque.
Kungenzeka kungahambisani nalesi sikhathi sonyaka, kepha kufanele ulondoloze ukuvakasha kwakho eColmar ngesikhathi lapho benza izimakethe zabo zikaKhisimusi. Leli dolobha ivelela ngokuba nezimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi kusuka kuwo wonke umhlaba, imigwaqo ihlotshiswe ngamalambu futhi igcwele amatafula. Kuwo wonke amadolobha, ezindaweni ezinjengePetite Venise, iRue des Marchands noma i-Place des Dominicains ungabona lezi zimakethe ezinkulu eziqala ekupheleni kukaNovemba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Colmar, vakashela igugu le-Alsace